Bit By Bit - Mustaqbalka - 7.2.3 Ethics in design cilmi
Anshaxa ka dareen durugsan si walaac dhexe dhaqaaqi doono oo sidaas daraaddeed wuxuu noqon doonaa mawduuc cilmi.
Da'da dijitalka ah, anshaxa ayaa noqon doona arrin sii kordhaysa oo dhexdhexaadinaysa cilmi baarista. Taasi waa, mustaqbalka, waxaan kufakareyn doonaa wax ka yar wixii la qaban karo iyo in ka badan wixii la qaban lahaa. Sidii ay taasi dhacdo, waxaan filayaa in nidaamka ku salaysan hababka sayniska ee bulshada iyo hababka habraacsan ee aqoonyahannada xogta ay u kobcin doonaan wax sida mabaadii-ku salaysan ee lagu sharraxay cutubka 6aad. Waxaan sidoo kale filayaa in anshaxu noqdo mid sii kordhaya bartamaha, koraan mawduuca cilmi baarista. Si la mid ah sida ay cilmi-baarayaasha bulshadu hadda u qaadaan wakhti iyo tamar si ay u horumariyaan habab cusub oo u sahli kara qiyaasta raqiisan iyo qiyaasta saxda ah, waxaan rajeynayaa inaan sidoo kale ka shaqeyneyno sidii loo horumarin lahaa habab badan oo anshax ahaan masuul ka ah. Isbedelkan ayaa dhici doona maahan sababtoo ah cilmi-baarayaashu waxay ka taxaddaraan anshaxa dhammaadka, laakiin sidoo kale waxay ka taxaddaraan anshaxa si ay u sameeyaan cilmi-baaris bulsheed.
Tusaale ahaan isbedelladani waa cilmi baaris ku saabsan sirta gaarka ah (Dwork 2008) . Ka fikir in, tusaale ahaan, isbitaalku wuxuu faahfaahinayaa diiwaannada caafimaadka iyo cilmi-baarayaashu waxay doonayaan inay fahmaan qaababka xogtaas. Algorithm-ka gaarka ah ayaa u saamaxaya cilmi-baarayaasha in ay bartaan hababka isu-ururinta (tusaale ahaan, dadka sigaarka cabba waxay u badan tahay in ay qabaan kansar) inta ay yareeyaan khatarta ah inay wax ka bartaan dabeecadaha shaqsi gaar ah. Horumarinta algorithms-ga ilaalinta gaarka ah waxay noqdeen meel firfircoon oo cilmi baaris ah; fiiri Dwork and Roth (2014) si aad u hesho daaweyn mudo-dheer. Qarsoodi kala duwanaanshuhu waa tusaale u ah bulshada cilmi-baarista qaadashada caqli-celin anshaxeed, udubdhexaadin mashruuc cilmi baaris ah, ka dibna samaynta horumar. Tani waa qaab aan u maleynayo inaan sii kordhin doonno meelaha kale ee cilmibaarista bulshada.
Awoodda cilmi-baarayaasha, badanaa ayadoo lala kaashanayo shirkadaha iyo dawladaha, ayaa sii wadi doona inay koraan, way sii adkaanayaan in ay ka fogaadaan arimaha anshaxa culus. Waxay ahayd waayo-aragnimadayda in aqoonyahanno badan oo cilmi-baarayaal ah iyo aqoon-yahanada xog-ururintu ay u arkaan arrimahan anshaxeed ee loo yaqaan "swamp to avoid". Laakiin, waxaan qabaa in ka-hortagga uu noqon doono mid sii kordheysa oo aan loo qaadan karin sida istaraatijiyad. Annaga oo ah bulsho, wax ka qabashada dhibaatooyinkaan haddii aan ku boodno oo aan wax ka qabanno hal-abuurka iyo dadaalka aynu u adeegsanayno dhibaatooyinka kale ee cilmi-baarista.